DAAWO VIDEO:Khilaafka Camey Iyo Gaas Siyaasinti Dhulbahante oo Camey La Saftey Garoowe.
December 5, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 7
waxaa Sii Xoogaysanaya Khilaafka Siyaasadeed ee U Dhaxeeya Madaxweynaha Puntland iyo Kuxigeenkiisa Isagoona Siyaasada Ku kala Qeyb samay.
Siyaasinta Dhulbahante ee Kusugan Garoowe Ay la Safteen Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Cabdixakim Xaaji Cumar camey.
Waa hadaladii dadka cudurka qabiilka qaba
Siyaasada qofkii kaa horyimaada waa u muujinaysaa inaad ka soohorjeedo
Hawiye hadaad fiiriso dadkii iska horyimaada aalaaba waa isku jifo hada lma dhahaan hebel reerkiisaa la saftay Hada bal arka dadka cudurka qaba oo Qormadaan cinwaan uga dhigay Dhulbahantaa la saftay Camey Kuwa idinla safan ee dhulbahantaha ah ma idiin muuqdaan
Awalba dad hoosaad baad eheedeen firkiina waa la yaqaanaa ee daawo ma lihidin
Puntlaan waxaa madaxweeyne ka ah Gaas.Haddii labadooda mid tagayana waxaa hor tagay Ina Camay.Siyaasiinta dhulbahante ee garoowe jooga haddii ay la saftaan Ina Camay waa hawl ayaga u gaara oo ciduna tabimayso in ay maqan yahiin.Ina Camay isagaa sheegay in xamar laga soo wacay oo lagu yiri ka shaqee si ay ku bur-burto puntlaan.Mana uu qarin oo afkiisuuku sheegay miskiinku.War reer puntlaan waxaa waxba ka qaadi waayey maamulkii xooga iyo xoolaha haystay ee Muxammad siyad Bare.Kabacdina waxaa iskudayey in ay baabi’iyaan reer puntlaan Mooryaantii usc wayna ku wada khasaareen.Xildhibaanada dhulbahante ee garoowe jooga haddii ay leeyahiin cod midaysan iyo awood ay cid wax ugu dhimikaraan ha ugu hiiliyeen Dhulbahante.
Ina camay wuu is ceebeeyey markuu yiri xamar bay iga soo waceen niman generaalo ah.
Anyway Ina camay is gone.
Abdulgadir Hussein says:
Ciidamadii waxay ku qulqulayaan Tukaraq, bulshadii puntland waxay lagarab taaganyihiin ciidankooda garab iyo gaashaan, wiilashii waxay tubanyihiin laamigii laascaanood si ay ciidanka usoo dhaweeyaan, dumarkii mashxarad iyo burabur meelkasta lataaganyihii , issimadii gabdhihii bey bixiyeen , aaway gaas, wax sheegaya. Inuu iscasilo bey ahayd. Gaas sharaftii daarood alleylehe waa burburiyey
Maxaa sabab u ah in xaaladu hadda halkan timaado.?
Ololaha doorashadda, hardanka iyo suxul duubka loogu jiro xulista xildhibaanada cusub ee Puntland waa sababta koowaad ee salka u ah khilaafka gudigan.
Waa arin aan qofna ka qarsoonayn in Madaxweyne Gaas iyo Madaxweyne kuxigeen Camey labaduba gacan togaaleeyeen iskuna dayeen inay saamayn ku yeesheen xulista xildhibaanada cusub.
Eng Camey wuxuu u dagaalamay in xildhibaano isaga la mowqif ah soo baxaan gaar ahaana kuwa gobolka Cayn oo uu kasoo jeedo.
Kursiga dagaalka ba’an ka dhacay oo Gaas iyo Camey ku hardameen waxaa kamid ah xildhibaanka jifadda Madaxweyne Camey oo 5 tii sano ee u danbeeyey uu ku fadhiyey Xil Cumar X Cabdi Akbe. Eng Camey wuxuu si weyn ugu dadaaley inuu kursiga kusoo laabto Xil Cumar taasoo uu ku guuldaraystey.
Qodobka labaad ee dagaalka ba’an ka dhashay oo markale Gaas iyo Camey isku maan dhaafeen ayaa ah magacaabista xubinta gudiga xalinta khilaafaadka u gelaysa gobolka Cayn kaaso Madaxweyne Gaas u magacaabay Huseen Cali Xasan (Somali) halka Eng Camey soo jeediyey in laga dhigo laba nin oo kale midkood.
Balse Gaas oo la tashanaya Xildhibaanada cusub ee deegaanka kasoo jeeda (aan wali la ansixin) kuwaasoo wata saxiixa Isimadooda ayaa ku gacan sayray arintaas oo magacaabay Xuseen Soomaali.
Waxaa xusid mudan in Eng Camey 6 bilood ka hor isbaray Xuseen Soomaali iyo Madaxweyne Gaas. Xiligaas Camey wuxuu soo jeediyey in Xuseen lagu daro gudiga Xalinta khilaafaadka balse dabaysha siyaasadeed ee marba dhinac u roorta iyo gadgadoonka waayaha oo ay ugu horayso arinta Xildhibaanka aan kor kaga soo sheekaynay ayaa Camey mowqifkiisa bedeley balse waxba ugama suurta gelin.
Labada masuul ee talada haya dastuurku wuu kala jideeyey awoodahooda siyaasiga ah balse hadda arintu waxay u muuqataa in dastuurka dhinac la iska dhigay xaalkuna yahay isku maqan lagu maqan yahay.
Arinta Baarlamaanka iyo gudoomiyaha wakhtigiisu dhamaaday.
Sharciyan Puntland hadda malaha baarlamaan. Dastuurka Puntland ayayna ku cadahay wixii ka danbeeya bilowgii Nov in uu dhamaaday wakhtigii baarlamaanka loona dareeray xulista baarlamaan cusub. Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanku wuxuu lumiyey xubintii xildhibaanimo ee beeshiisa arimaha faragelinta ayaa keenay in wiil kamid ah shaqaalaha Madaxtoyada uu kaga guulaysto tartankii xildhibaanka ee beesha dhexdeeda.
Sidaas darteed majirto awood sharci oo maanta uu leeyahay gudoomiyaha baarlamaankii 4’aad ee Puntland.
Halkee saldhigan doontaa xaaladdani.?
Inta xog ogolaalka ah iyo kuwa sharciga dalka wax uun ka akhriyey caad kama saara meesha arintu sal dhiganayso oo baarlamaanka waxaa ansixin doona gudiga Ku soo baxay xeer Madaxweyne.
Arintuna kama duwanaan doonto gudigii musharaxiintu ka barbar magacaabeen xiligii Faroole gudiga magacaabay taasoo markii danbe iyadoo aan la wada hadal wax heshiis ahna dhicin loo hogaansamey gudii Faroole magacaabay.
Somaaliyey warxumo tashiil iyo qabyaalad baad arinka laba cabdi kadhigayseena ma ku qanacdeen qoraalkaas? Wallee waano abuuris ba kahoreysay
camey wa qasaaro says:
Ina camey waxuu horey u qillafey gaas iyo axmedmadoobe dowlad goboleedyada! xaguu camey u socdaa?
camay waa madaxwayne maahan xoghaynta gaas
sidaa dartee wuxuu leeyahay awooda gaas midlamida waayo waa 4.5 waxwalba